Ezi ziindaba ze-beta yesine ye-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15 | IPhone iindaba
Ezi ziindaba ze-beta yesine ye-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15
Ingelosi Gonzalez | 28/07/2021 10:48 | iOS 15, Izaziso
Iindaba zenzeka kwiibhetas zabaphuhlisi beenkqubo ezintsha zeApple. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo beta yesine ye-iOS 15, i-iPadOS 15 kunye nezinye iinkqubo. Nangona amanqaku akhululayo asemthethweni okhutshiweyo amatsha egxile ekusebenziseni inkqubo kunye nokulungisa iibugs ezichazwe ngabaphuhlisi, Kwakhona kukho iindaba ezivela kwiibhetas zangaphambili. Kule nto beta 4 Olunye utshintsho luziswa malunga noyilo olukhulu lweSafari, iiwijethi ezintsha kunye nezinye izinto zingeniswa kwii -apps zemveli ezinje ngemvelaphi yoopopayi kwiNkqubo yeMozulu. Sikuxelela iindaba ezingezantsi.
Yintoni entsha kwi-beta 4 yabaphuhlisi be-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15
Izinto ezintsha ezinqabileyo ezinxulumene nesisombululo seempazamo eziphinde zashicilelwa ngabaphuhlisi ziyafumaneka kwifayile ye- Iwebhusayithi esemthethweni ka-Apple. Kwinqaku sinokubona iimpazamo ziphuhlisiwe ziyalelwe yi-API okanye ulwakhiwo oluchaphazelekayo. Nangona kunjalo, abasebenzisi abangazi kangako malunga nekhowudi okanye iimpazamo zenkqubo bajolise ngakumbi kwinto entsha enelungelo elilodwa lomenzi kunye nebonakalayo kule beta yesine. Siza kuhlalutya ezo zibonakala kwiiyure zokugqibela. Nangona kucacile ukuba ziya zisanda iindaba eziza kuphuma ngokuhamba kwexesha. Inguqulelo entle ebandakanya utshintsho kuwo onke amanqanaba enkqubo.
I-Apple iyaqhubeka nokwenza i-Safari kwi-iPadOS 15.
Kwi-iPadOS 15 beta 4, ibar ye-tab eyahlukileyo ibuyile, kwaye siseto esimiselweyo ngoku.
Ukuba uyafuna, unako * ngokuzikhethela * ukwenza i-bar ye-compact tab entsha kwiisetingi.
Umnxeba olungileyo. 👍 pic.twitter.com/26GNfeJSyE
-Federico Viticci (@viticci) Julayi 27, 2021
Siqala nge I-iPadOS 15 edibanise amanqaku amatsha eSafari emva kotshintsho olukhulu kuyilo kunye nomxholo kwiibhetas zokugqibela. Kwi-beta 4 ibar ye-tab eyahlukileyo yongezwa apho umsebenzisi anokubona i-URL ephambili phezulu nasezantsi, ngaphantsi kwe-URL, iithebhu. Ijongeka ngakumbi nangakumbi njengeSafari esinokuyibona kwiMacOS Monterey. Nangona kunjalo, iApple yenze ukuba kufumaneke kumsebenzisi kwiiSetingi ithuba lokuba buyela kulwakhiwo lwakudala lweSafari Ukutshintsha phakathi kwe 'compact' okanye 'eyahlukileyo' ekubhekiswa kuyo kwindawo yokukhangela kunye neethebhu.
I-Safari kwi-iPhone ikwenze notshintsho kwi-beta 4. Iqhosha lesabelo litshintshiwe ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye kwaye livela kwi-bar ye-tab, iqhosha lokuhlaziya liyabandakanywa ecaleni kwe-URL ngolu hlobo kwaye i-animation nayo yongezwa ukunciphisa ithebhu. ibha xa ukhangela iwebhusayithi. Okokugqibela, xa ibar ye-URL icinezelwe imizuzwana embalwa, ukhetho 'lokubonisa amanqaku encwadi' luyavela.
Kwixesha lokusebenza kwe-beta 4 ye-iOS 15, zibandakanya imvelaphi emitsha yoopopayi njengaleyo sinokubona kumfanekiso ophethe inqaku. Iziphumo zale mvelaphi yoopopayi zicocekile kuthathelwa ingqalelo utshintsho kwi-iOS 15 olwenziwe kwezinye ii -apps zemveli ezinje ngale.
Kukwafakwe nokwenzeka yabelana ngeNdlela yoGxininiso apho sidibana khona nomntu ngamnye. Kwelinye icala, ezinye uyilo ezazilahlekile ukuba zilungiswe kwi-interface entsha kwi-iOS 15 zilungisiwe, ezinje nge 'Akhawunti' icandelo le Ivenkile yosetyenziso. Isiphumo sikukujikeleza kweetafile ezivumela ukungqinelana phakathi kwazo zonke iimenyu zenkqubo.
Intshukumo entsha ebizwa ngokuba 'Buyela kwiscreen sasekhaya' ifakwe kwi-Shortcuts app. Ungadlala ngayo ngeendlela ezimfutshane ezahlukeneyo esele zenziwe okanye ngezo ziyakwenziwa ukusukela ngoku. Okokugqibela, kuye kwaziswa ubungakanani obutsha bePodcasts app widget Kwi-iPadOS 15.
Amawijethi kunye neLayibrari yeApp kwi-iPad intle kakhulu. Kwaye ukuba ukutshintsha kwesikrini saseKhaya ngasinye ngokusekwe kugxilwe kakhulu kuluncedo.
Andifuni iphepha lomdlalo ngexesha lomsebenzi, kwaye andizifuni iindaba xa ndingasebenzi. Ndiza kuvavanya ubungakanani begranularity apha. pic.twitter.com/jLM5tKahSG
-Wesley Hilliard (@HilliTech) Juni 13, 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ezi ziindaba ze-beta yesine ye-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15